ကျွန်တော်တို့သည် Myanmar နှင့် Santos (Brazil) နှစ်နိုင်ငံပေါင်းတိုက်ရိုက်ညွှန်းကြား ဖွဲ့စည်းထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ Customer များအတွက်Santos မှ Sao Paulo အထိ အခမဲ့ အိမ်အရောက်ပို့ဆောင်မှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုတိုးမြှင်ပြီး အထူးဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအနေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုက စတင်လိုက်ပါပြီ။ - Topics - Topics Myanmar
ကျွန်တော်တို့သည် Myanmar နှင့် Santos (Brazil) နှစ်နိုင်ငံပေါင်းတိုက်ရိုက်ညွှန်းကြား ဖွဲ့စည်းထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ Customer များအတွက်Santos မှ Sao Paulo အထိ အခမဲ့ အိမ်အရောက်ပို့ဆောင်မှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုတိုးမြှင်ပြီး အထူးဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအနေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုက စတင်လိုက်ပါပြီ။
Myanmar နှင့် Santos ( Brazil ) နှစ်နိုင်ငံပေါင်းတိုက်ရိုက်ညွှန်းကြား ဖွဲ့စည်းထားသောစီးပွားရေး လုပ်ငန်း၏ Customer များအတွက် Sao Paulo ဒေသမှာတော့ ကားစီးလုံးတိုက် ကုန်စည်ဝန်ဆောင်မူ ထက်နည်းတဲ့ ကုန်စည်ပို့ဆောင်မူကို ဆိပ်ကမ်းကနေ အိမ်အရောက် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မူအနေနဲ့ ဇန်န၀ါရီလ ၂ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကတည်းက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုတိုးမြှင့်ပြီး အထူးဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအနေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုက စတင်ခဲ့ပါတယ်။ Santos port ဆိပ်ကမ်းမှာ ကနဦး ၀န်ဆောင်မူပေးခြင်းကို ASIA SHIPPING တစ်ခုတည်းကသာ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျေးဇူးပြုပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်သူများနဲ့ ဆက်သွယ် အတည်ပြုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Origin: JAPAN GTC ASIA (MYANMAR) CO., LTD.
Mr. Than Lynn,
Team Leader of Export Sales Section.
Destination: ASIA SHIPPING INTEGRATED LOGISTICS
Mr. Ricardo Tavares,
Manager of Contract Logistics Dept.
Tel: + 55 11 2179-1799
※ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်ပ်တို့ ၀န်ဆောင်မူကို အသုံးပြုရာမှာ FCL နဲ့ LCL နဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘက်စုံပို့ဆောင်ရေးဆိုင်သော လုပ်ငန်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးပါ၊ လူကြီးမင်းတို့ ထံမှ စုံစမ်းမေးမြန်းမူများကို မကြာခင် ကြားသိရမယ်လို့ စောင့်မျှော်လျှက်ပါ။
02-01-2014 | Topics Archive